မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်အခြေခံသိစရာ၊ကျင့်စရာ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်အခြေခံသိစရာ၊ကျင့်စရာ။
Posted by Visesa on Sep 12, 2010 in Buddhism, Literature/Books, Myanma News | 1 comment
“ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သို့မဟုတ် အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ”
မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သို့မဟုတ် အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးသည်…နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ဆွမ်းတော်တင် လှူဒါန်းခြင်း၊ သောက်တော်ရေ၊ ဆီမီး၊ ပန်းလှူဒါန်းခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးသီလခံယူ စသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်ကြရ၏ – ယင်းသို့ပြုလုပ်ရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို သိထားသင့်၏၊ သိထားပါမှ မိမိ၏ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပိုမိုအားတက်ကြည်ညိုနိုင်မည် ဖြစ်သည်၊သို့ဖြစ်၍ ဤသို့ သိမှတ်လွယ်အောင် အကျဉ်းမျှ ရေးသားဖော်ပြပါမည် ။
“ အနန္တငါးပါးရှိခိုးကန်တော့ရန် ”
၄။ မာတာပိတူနံ= မိဘနှစ်ပါးတို့အား၊ ပူဇေမိ= ပူဇော်ပါ၏ဘုရား ။
၅။ အာစရိယာနံ = ဆရာသမားတို့အား၊ ပူဇေမိ= ပူဇော်ပါ၏ဘုရား ။
အပြစ်တို့ကို ပျောက်ပါစေခြင်း အကျိုးငှါ၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်၊
သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ၊ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊
ရတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကို၊ အရိုအသေ၊ အလေးအမြတ်၊ လက်အုပ်မိုး၍ ၊ ရှိခိုးပူဇော်၊
ဖူးမြော်မာန်လျှော့ ၊ ကန်တော့ပါ၏ ၊ အရှင်ဘုရား ။
ကန်တော့ရသော အကျိုးအားကြောင့်၊ အပါယ်လေးပါး၊ ကပ်သုံးပါး၊ ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး၊ ရန်သူမျိုးငါးပါး၊ ၀ိပတ္တိတရားလေးပါး၊ ဗျဿနတရားငါးပါးတို့မှ၊ အခါခပ်သိမ်း၊ ကင်းလွတ်ငြိမ်းသည်ဖြစ်၍ ၊ မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရား၊ နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကို ၊ ရပါလို၏ ၊ အရှင်ဘုရား။ (မှတ်ချက်) သြကာသဆိုရိုးမှာ ( နော်ဝေ ) ရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံး တစ်သံတည်း ဖြစ်စေရန်နှင့် ဆုပေးသည့်ရဟန်း (သို့မဟုတ်) မိဘ၊ ဆရာရှိလျှင် ဆုတောင်းရန်အပိုဒ်ကို ဆိုစရာမလိုပါ။
တိသရဏေနသဟ၊ ပဉ္စသီလံ၊ ဓမ္မံယာစာမိ၊ အနုဂ္ဂဟံ ကတွာ၊ သီလံဒေထ၊ မေဘန္တေ။
ဒုတိယမ္ပိ၊ အဟံ ဘန္တေ၊
တိသရဏေန သဟ၊ ပဉ္စသီလံ၊ ဓမ္မံယာစာမိ၊ အနုဂ္ဂဟံကတွာ၊ သီလံဒေထ၊ မေဘန္တေ။
တတိယမ္ပိ၊ အဟံဘန္တေ၊
နမောတဿ ဘဂ၀တော၊ အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ ။( ၃ခေါက်ဆိုပါ )
ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသော ပူဇော်အထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သော ဆရာမရှိ မိမိအလိုလို ကိုယ်တော်တိုင် သစ္စာလေးပါးသိမြင်တော်မူသော ထိုမြတ်စွာဘုရားအား ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။
ခြင်းမကျင့်ပါဘုရား) ၄။မုသာဝါဒါဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဒိယာမိ။ (လိမ်ညာ၍မဟုတ်မမှန်မပြောပါဘုရား) ၅။ သုရာမေရယမဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဒိယာမိ။ (မူးယစ်သေစာ်၊မသောက်စားပါဘုရား )
သမ္ပန္နာဂတံ = ပြည့်စုံတော်မူသော၊
မာန်လျှော့ =မိမိသန္တာန်မှာရှိသော မာန်မာနတရားများကို လျှော့ချဖယ်ရှားခြင်း (ရတနာသုံးပါးကို မြင့်မြတ်ရာ၌ထားခြင်း) ကို မာန်လျှော့သည်ဟုခေါ်ပါသည်။ ( မာန်လျှော့ခြင်းကို နိဝါတမင်္ဂလာဟု မှတ်ပါ )
မဂ် = နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်သောတရားလမ်းကိုမဂ်ဟုခေါ်သည်။
ဖိုလ် =မဂ်၏အကျိုးတရားကိုဖိုလ်ဟုခေါ်သည်။ နိဗ္ဗာန် = ရာဂ(တပ်မက်ခြင်းတဏှာ) ဒေါသ(စိတ်ဆိုးမှု၊ ဖျက်ဆီးမှု၊ ပြစ်မှားမှု) မောဟ (မိုက်မဲခြင်း၊မသိခြင်း၊ တွေဝေခြင်း ၊ အ၀ိဇ္ဇာ) တို့၏ ကင်းရာငြိမ်းအေးမှုဓါတ်သဘောကို နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်သည်။
နမော တဿ= ဘုရားကိုရိုသေလေးစားခြင်း ၊ အစဉ်အလာကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအနေဖြင့် “နမောတဿ”ကို သုံးခေါက်ရွတ်ဆိုရသည် ။
(၁) ငရဲ = ချမ်းသာအနည်းငယ်မျှ မရှိဘဲ၊ မီးတောက်မီးလျှံ၊ ဒါးလှံစက်တို့၌ ခံရခြင်းကို“ငရဲ”ဟုခေါ်ပါသည် ။
(၁) ဒုဗ္ဘိက္ခ န္တရကပ် = အစာခေါင်းပါး ငတ်မွတ်ခြင်းကြောင့် များစွာသေကြေပျက်စီးခြင်း ။
(၂) သတ္တန္တရကပ် = သေစေတတ်သော ဓါး၊ လှံ၊ သေနတ်၊ စသောလက်နက်တို့ဖြင့်၊ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ထိုးခုတ်၍ များစွာသေကြေပျက်စီးခြင်း ။
(၃) ရောဂန္တရကပ်= ကူးစက်တတ်သော အနာရောဂါ ကျရောက်သဖြင့် မျာစွာသေကြေပျက်စီးခြင်း ။
မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန် မရနိုင်သည်ကိုစွဲ၍ ရပ်ပြစ်ဟုခေါ်ပါသည်
(၅) ပစ္ဆ န္တရစ်အရပ် ။
 ဖောက်ပြန်ချွတ်ယွင်းခြင်းကိုဝိပတ္တိဟုခေါ်သည် ။ “ ၀ိပတ္တိတရားလေးပါး ”
ဆွေမျိုး၊ ဥစ္စာ၊ ရောဂါ၊ အယူ ၊ အကျင့်ပျက်စီးခြင်းကိုဗျသနဟုခေါ်သည်။
(၅) သီလဗျသန = ကောင်းသောအကျင့်သီလ ပျက်စီးခြင်း ။
ပါရမီဖြည့်ဘက် = သုမိတ္တာအမျိုးသ္မီး ။ (ယသော်ဓရာ အလောင်း)
ချမှတ်သောလမ်းစဉ် = မဇ္ဈိမပဋိပဒါ မဂ္ဂင်လမ်းစဉ် ။
သန္ဓေယူသောနေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် ၆၇၊ ဝါဆိုလပြည့် ကြာသပတေးနေ့ ။
ဖွားမြင်သောနေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈၊ ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့ ။
တောထွက်သောနေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် ၉၇၊ ဝါဆိုလပြည့် တနင်္လာနေ့ ။
ဘုရားဖြစ်သောနေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ၊ကဆုန်လပြည့် ဗုဒဟူးနေ့ ။
ဓမ္မစင်္ကြာဟောသောနေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ၊ဝါဆိုလပြည့် စနေနေ့ ။
ပရိနိဗ္ဗာန်စံသောနေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ၊ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့ ။
တေဇောဓါတ်လောင်သောနေ့ = ၁၄၈ ၊ကဆုန်လဆုတ် ၁၂ ရက် တနင်္လာနေ့ ။
ဝိမာန ဝတ္ထုတော်တွင် ဥတ္တရာနတ်သမီး၊ သောဏဒိန္နာနတ်သမီး ၊ဥပေါသထာနတ်သမီး
တို့သည် ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ကျင့်သုံးသဖြင့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော နတ်စည်းစိမ်ကို
ရရှိကြောင်း ဖော် ပြထား၏ ၊
ဥပုသ်သီလဆောက်တည်သဖြင့် ကောင်းကျိုးရသောအခြားသာဓကဝတ္ထုများလည်း များစွာရှိပေသေး၏။သို့ဖြစ်၍ ဥပုသ်သီလကို မပြတ်စောင့်ထိန်းသင့်ကြပါသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်အခါက မဋ္ဌကုဏ္ဍလီအမည်ရှိ လူငယ်တစ်ဦးသည်၊ သေလုဆဲဆဲအိပ်ယာထဲလဲနေ၏၊ ထိုသူငယ်သေလွန်လျှင် ငရဲသို့ကျရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြတ်ဗုဒ္ဓက သိမြင်တော်မူ၏၊မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ထိုသူငယ်အား ကယ်တင်လိုသဖြင့်
သည်၊ ထိုလူငယ်သည် ဘုရားရှင်အား၊ ဖူးမြင်ခွင့်ရသဖြင့်ကြည်ညိုစိတ်ပေါ်လာပြီး အိပ်ယာထဲအိပ်လျှက်ပင်ရှိခိုး၏ ၊ မကြာခင် ထိုလူငယ်သေဆုံး၍ နတ်ပြည်၌တစ်ဆယ့်နှစ်ယူဇနာရှိသော၊ ဗိမာန်ရှင်နတ်သားဖြစ်လေသည်။
နတ်သားဖြစ်ရလေသည် ။ထိုမျှသာမက ဘုရားရှိခိုးခြင်း ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားများခြင်း အကျိုး (၁၁) မျိုးကိုလည်း ရရှိနိုင်ကြပေသေးသည်၊ ယင်းတို့ကား
(၈) စေတီအလား ပူဇော်ထိုက်ခြင်း ။ (ဘုရားဂုဏ်တော်ပွါးများသူတို့၏ ကိုယ်ခန္ဒာသည် စေတီအလား ပူဇော်ထိုက်သည်ဟုဆိုလိုသည်)
(၁၀) အရှက်အကြောက်ဖြစ်ခြင်း ။ (အကုသိုလ်ဖြစ်မှု ကျူးလွန်စရာတွေ့ခဲ့သော် ဘုရားအာရုံထင်မြင်လာ၍ ဟီရိသြတ္တပ္ပ အရှက်အကြောက်ဝင်ပြီး မလွန်ကြူး ခြင်း )
(၁၁) နတ်ရွာစံသော် သုဂတိလားခြင်း ။ (ဤဘဝ၌ မဂ် ဖိုလ် မရသေးစေကာမူ ကွယ်လွန်သောအခါ ဒုဂ္ဂတိမကျနိုင်။) ( ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ပထမစာအုပ် )
လုံးစုံများစွာသတ္တဝါ ၊ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ၊ဥပါဒ်ရန်ဘေးကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
မြင်အပ် မမြင်အပ် နှစ်ရပ်များစွာ ၊ သတ္တဝါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ၊ ဥပါဒ်ရန်ဘေးကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ ။
ရှည် တို အလတ် သုံးရပ်ခန္ဓာ သတ္တဝါ ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ၊ ဥပါဒ်ရန်ဘေးကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ ။
ကြီး ငယ် အလတ် ၊ သုံးရပ်ခန္ဓာ သတ္တဝါ ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ၊ ဥပါဒ်ရန်ဘေးကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ ။
ဆူ ကြုံ အလတ် ၊ သုံးရပ်ခန္ဓာ သတ္တဝါ ၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ၊ ဥပါဒ်ရန်ဘေးကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြပါစေ ။
တို့ကို ရွတ်ဆို၍ မေတ္တာပို့သဖြင့် နတ်ဘီးလူးတို့ခြောက်လှန့်မှုကင်းဝေးခဲ့၏ ။ ထိုမျှသာမက မေတ္တာ၏ အကျိုး (၁၁) မျိုးကို ရရှိနိုင်ကြပေသေးသည်၊ ယင်းတို့ကား
မြတ်ဗုဒ္ဓ လက်ထက်တော်က သာဝတ္ထိပြည်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာတရွာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်၊ ဘုရားဖူးခရီးသည် ရဟန်းတော်များအား ရေလှူသဖြင့် သေလွန်လျှင် တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ နတ်သမီးဖြစ်ပြီး ခမ်းနားကြီးကျယ်သော နတ်စည်းစိမ်ကို ခံစားရလေသည်။ ( ဝိမာန၊ ဋ္ဌ။ လှေယာဉ်စီး နတ်သမီးဝတ္ထု )
ထို့အပြင် ရေအကျိုး (၁၀)ပါးရှိကြောင်းလူအများသိကြ၏ ယင်းတို့ကား —-
သေလွန်သောအခါ ထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ နတ်သမီးဖြစ်ပြီး နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားကြရလေသည် ။
ဤသို့ဖြင့် ထိုနတ်ပြည်မှာ ဆက်ကာဆက်ကာ ဖြစ်ရပြီး ဤဘုရားလက်ထက်တွင် နတ်သမီးဘဝဖြင့် တရားနာကြရကာ သောတပန်ဖြစ်ကြလေသည် ။
ဂေါတမ ဘုရားလက်ထက်တော်အခါက သာဝတ္ထိပြည်သူတဦးသည် တရားပွဲ၌ ဆီမီးညှိထွန်းလှူဒါန်းသဖြင့် သေလွန်သောအခါ တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ နတ်သားဖြစ်ရလေသည် ။ ဆီမီးညှိထွန်းလှူဒါန်း
“ မြတ်စွာဘုရား၏ ကိုယ်စား ရုပ်ပွားတော် ကိုးကွယ်သူများ
သိသင့်သိထိုက်သော အချက်အလက် ”
(၂) ဆင်းတု ရုပ်ပွားတော်များအဖြစ် ထုလုပ် သွန်းလောင်းအပ်သောအရာများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်သည် ။
(၄) ထုလုပ်ရာတွင် မည့်သည့်အချက်များကို သတိပြု ဂရုထားအပ်သည်တို့ ဖြစ်ကြ၏ ။
တစ်နေ့သ၌ ပေဿနဒီ ကောသလမင်းကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားအား ဖူးမြော်ကန်တော့ရန် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်သို့ သွားရောက်ခဲ့လေရာ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ၀ါပအခါတွင် ဒေသစာရီကြွချီတော်မူမြဲအတိုင်း ကြွချီတော်မူ၏ ။ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၌ မြတ်စွာဘုရားသခင် ရှိတော်ခိုက်မဟုတ်သဖြင့်မဖူးမတွေ့ရသည်နှင့် မင်းကြီးသည် စိတ်တော်ညိုးနွမ်းကာ ကျောင်းတော်က်ို ဆီ မီး ပန်း နံ့သာတို့ဖြင့်ပူဇော်ပြီး နန်းတော်သို့ပြန်လည်ကြွခဲ့ရလေသည် ။ မြတ်စွာဘုရားလည်း ဒေသစာရီကြွချီရာမှ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်သို့ ပြန်ရောက်တော်မူခဲ့ရာ ဗုဒ္ဓပြန်လည်ရောက်ရှိတော်မူပြီဟု မင်းကြီးကြားသိလျှင် မှူးမတ်ဗိုလ်ပါခြံရံလျက် မြတ်စွာဘုရားထံ သွားရောက်ပြီး “ ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရား အရှင်ဘုရားသည် ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးရှိနေပါသော် တပည့်တော်တို့သည် တရားတော်ကိုလည်း နာယူရပါ၏ ၊သီလတော်ကိုလည်း ဆောက်တည်ကြရပါ၏ ။ ကျောင်းတော်၌အရှင်ဘုရားမရှိခဲ့သော် တပည့်တော်တို့သည် အလှူလည်းမပြုရ တရားတော်လည်း မနာကြားရ ၊သီတင်းသီလလည်း မဆောက်တည်ရ ဖြစ်ခဲ့ရပါ၏ ။
အရှင်ဘုရားကိုယ်စား ရုပ်ပွားတော်ကို ထုလုပ်ပူဇော်လိုပါသည် ခွင့်ပြုတော်မူပါလော့”-ဟု လျှောက်ထားတောင်းပန်လေသည် ။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလည်း သာဓုသုံးကြိမ် သုံးခါခေါ်ဆိုပြီးနောက် မင်းကြီး၏ လျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်ကို ခွင့်ပြုတော် မူခဲ့ပေ၏ ထိုအချိန်မှစ၍ ဆင်းတုရုပ်ပွားတော်များ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပေတော့သည် ။
(၂) မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ကောသလမင်းအား မိမိ၏ကိုယ်စားတော် ရုပ်ပွားဆင်းတု တော်များ ထုလုပ်သွန်းလောင်းလုပ်ရန် အရာဝတ္ထုများကိုပါထုတ်ဖေါ်မြွက်ကြားတော်မူခဲ့ပေ၏ ။
“ မင်းကြီး သဒ္ဓါ ပညာ ၀ီရိယနှင့်ပြည့်စုံသော မင်း ပုဏ္ဏား သူဋ္ဌေးသူကြွယ် ဆင်းရဲသားတို့သည် မိမိတို့၏ တတ်စွမ်းနိုင်သည့်အားလျော်စွာ ရွှေဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ငွေဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ပတ္တမြားဖြင့်လည်းကောင်း ၊ကြေးဖြင့်လည်းကောင်း ၊ သံဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ခဲဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ကြေးနီဖြင့်လည်းကောင်း ၊ သစ်ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ အုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ကျောက်ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ အဆင်းရှိသောဆေးဖြင့်လည်း ကောင်း ၊
ကျောက်မျက်ရွဲတို့ဖြင့်လည်းကောင်း သွန်းလောာင်းအပ် ထုလုပ်အပ်၊ ရေးသော်လည်း ရေးအပ်
ပေ၏ ”ဟု မိန့်ကြားတော်ခဲ့၏ ။
ဗုဒ္ဓကိုယ်စား ရုပ်ပွားတော်များ ထုလုပ်ရန် မြတ်စွာဘုရားသည် ကောသလမင်းအား မိန့်ကြားရာတွင်“ ငါဘုရားသည် ဗောဓိပင်နှင့်ပုလ္လင်တော်၌ မာရ်စစ်သည်တို့ကို အောင်မြင်တော်မူဟန်ကိုလည်းကောင်း ၊
မမှိတ်သော မျက်စိဖြင့် ကြည့်တော်မူဟန်ကိုလည်းကောင်း ၊အာဋ္ဌာရနှင့် ဥဒကရသေ့ကြီးတို့ ရှုံးခြင်းကြီး ရှုံးလေစွတကားဟုရင်လက်ခတ်တီး၍ အံ့သြတော်မူဟန်ကိုလည်းကောင်း၊
အရှင်အာနန္ဒာအား လက်သားတော်ဖြင့် မြေမှုန့်ပြတော်မူဟန်ကိုလည်းကောင်း ၊ လျောင်းစက်ကျိန်းတော်မူဟန်ကိုလည်းကောင်း၊ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူဟန်ကိုလည်းကောင်း ၊
ထုလုပ်ရာ သွန်းလောင်းရာ ရေးစွဲရာ၏ ”ဟု မိန့်မြွက်တော်မူခဲ့လေသည် ။
ဆင်းတု ရုပ်ပွားတော်များ ထုလုပ် သွန်းလောင်းလုပ်ရာ၌ ပါသာဒိကဂုဏ်တော်နှင့်ပြည့်စုံအောင် ကြည်ညိုဖွယ် အသရေတော်ဆောင်နေသည့်ပုံတော်မျိုးကို ထုလုပ် သွန်းလောင်း ရေးစွဲရမည်ဖြစ်၏ ။
တတ်နိုင်သမျှ လက္ခဏာတော်ကြီး လက္ခဏာတော်ငယ်တို့နှင့် ပြည့်စုံသည့်အသွင်ကို ဆောင်အောင်ထုလုပ် သွန်းလောင်း ရေးစွဲရမည် ။ လှပစေရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခြယ်သထားသောအမျိုးသ္မီးများတို့၏ မျက်နှာသွင်ပြင်မျိုးကဲ့သို့ မထုလုပ် မသွန်းလောင်း
မရေးခြယ်အပ်ပေ ။ ကြည်ညိုဖွယ်ကင်းမဲ့သော လက်တဖက်ကို ဆန့်တန်းထားခြင်း ၊ လည်ကုပ်တိုနှင့်ဝမ်းဗိုက်ပူ(အချို့ဒက္ခိဏသာခါဘုးရား) ထုလုပ် သွန်းလောင်း ရေးစွဲထားခြင်း၊မျက်နှာပေါက်ဆိုးစွာ ကြည်ညိုဖွယ်တင့်တယ်မှု သပ္ပာယ်မှုကင်းမဲ့သော
ပုံသဏ္ဌာန်မျိုးများကို ထုလုပ် သွန်းလောင်း ရေးခြယ်ခြင်းမှ ရှောက်ကြဉ်ရပေမည်။
ရတနာသုံးပါးကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သော ပုဂ္ဂုလ်တယောက်သည် ဖေါ်ပြလတ္တံ့ပါ ဂုဏ်အင်္ဂါများနှင့် ပြည့်စုံပါက အဆင့်မြင့် ဥပါသကာ ၊ ဂုဏ်သရေရှိ ဥပါသကာ စစ်စစ် ဖြစ်ပါသည် ။
(၁) ဘုရားရှင်၏ တပည့်သား သံဃာတော်များနှင့် အေးအတူ ပူအမျှ ဆင်းရဲချမ်းသာကို ဝေမျှခံစားခြင်း ။ (၂) ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်ကိုသာ အလေးဂရုပြုခြင်း ။ (၃) မိမိမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာကို မျှတစွာ ခွဲခြားသုံးစွဲ လှူဒါန်းတတ်ခြင်း ။ (၄) ဘုရားသာသနာ ပျက်စီးမည့်အရေး တွေ့မြင်ပါက သာသနာတော်- ကြီးပွားရာ ကြီးပွားကြောင်းကိုသာ မနေမနား ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း ။ (၅) အယူဖြောင့်မှန်မြီး လူပြိန်းတို့လက်ခံသည့် အထူးအဆန်းမင်္ဂလာကို ယုံကြည်မှု မရှိသည့်အပြင် မိမိအသက်ကို ပဓာနမထားဘဲ မိမိကိုးကွယ်ရာ ဆရာ (ဘုရား)မှ အယူပျက်သော တိတ္ထိဆရာများကို မိမိ၏ ဆရာအဖြစ် မည်သည့်အခါမျှ မရည်ညွှန်းခြင်း ။ (၆) ကာယကံ ၀စီကံ စောင့်ထိန်းခြင်း ။ (၇) အတူတကွ သာသနာရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် သင့်တင့် ညီညွတ်စွာ နေထိုင်တတ်၍ အချင်းချင်းအပေါ် ငြူစူမှုကင်းပြီး သာသနာတော်ကို ခုတုံးလုပ်၍ ဟန်ဆောင် ပလွှား ၀ါကြွားမှု မပြုခြင်း ။ (၈) ဘုရားရတနာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း ။ (၉) တရားရတနာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း ။ (၁၀) သံဃာရတနာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည် ။ ။
မြတ်စွာဘုရား၏ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို ပူဇော်ရှိခိုးကြသည့် သူများမှာ– “သက်တော်ထင်ရှား မြတ်စွာဘုရားပါတကား ” ဟုဂုဏ်တော်ကိုးပါးကို စိတ်ရောက်ပြီးကြ သူများ ဖြစ်ကြပါသည် ၊ ဖြစ်လည်းဖြစ်ရပါမည် ။ဤကဲ့သို့ ပူဇော်ကိုးကွယ်ကြမည်ဆိုလျှင် “သမေ စိတ္တေ သမံဖလံ ”ဆိုသည့် ဘုရားဟောပါဠိတော်အရ အကျိုးထူးများ ရရှိနိုင်ပါသည် ။ “ စိတ္တေ၊ မိမိ၏ စိတ်သည် ၊ (၀ါ) မြတ်စွာဘုရား၏ ရုပ်ပွားတော် ဆင်းတုတော်ကို ပူဇော်ရှိခိုး ကိုးကွယ်ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ စိတ်သည် ၊ သမေ ၊ သက်တော်ထင်ရှား မြတ်စွာဘုရားနှင့် ရုပ်တုဆင်းတုတော်၌ အညီအမျှ ထားနိုင်သည်ရှိသော် ၊ သမံ ဖလံ၊ ဘုရားအစစ်ကို ပူဇော်ရသကဲ့သို့ အကျိုးတရား အတူတူပင်ရရှိနိုင်ပါသည်” ထို့ကြောင့် ရုပ်ပွားဆင်းတု ကိုးကွယ်ကြသူများ၏ စိတ်သည် အချုပ်ဖြစ်သည် ၊ အဓိကလည်းဖြစ်၏ ။ မိမိစိတ်သည် စွမ်းလျှင် မိမိအား အကျိုးပေးစွမ်းမည်သာ ဖြစ်ပေသည် ။ မိမိတို့၏ နေအိမ်များအသီးသီးတွင် ရုပ်ပွားဆင်းတု ကိုးကွယ်ထားပြီးသည်နှင့် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ ရှိပါသည် ။ ဘုရားစင်ကို သီးခြားစင်မြင့်နှင့် ၊ ကိုးကွယ်ထားရမည် (ဘုရားစင်ကိုသီးခြားဘုရားခန်းနှင့် စင်မြင့် ၊ ကိုးကွယ်ထားနိုင်မည်ဆိုလျှင် အထူးဆိုဘွယ်ရာမရှိပေ) မိမိအာရုံပြု ပူဇော်လိုသည့် အချိန်တွင် ဘုရားခန်းထဲဝင်၍ ပူဇော်ကိုးကွယ်ရပါသည် ။ ဘုရားစင်ရှေ့ ၌ဒူးထောင် ပေါင်ကား မနေရပေ ၊မြတ်ဗုဒ္ဓက်ို အဂါရ၀ ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေထိုင်ကြလျှင် အပြစ်ဖြစ်ပါသည် ။ အပြောအဆို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ရပါမည် ။ ဘုရားစင်ရှေ့ထားပြီး ဆဲဆိုခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသောက်စားခြင်း၊ ရန်ဖြစ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ ၊ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးခံယူပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းအပင်းနဲ့ ငါမပတ်သက်ချင်ပါ စသော အမင်္ဂလာစကားများ မပြောဆိုမိခြင်းသည် သိပ်အရေးကြီးလှပါသည် ။ မိမိတို့အိမ်တွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဆင်းတုတော်များကို ဘုရားစင်နှင့်ကိုးကွယ်ထားခြင်းအားဖြင့် ဖေါ်ပြလတ္တံ့ပါ အကျိုးကျေးဇူး(၉)မျိုးကို ရရှိပါသည် ။
(၅) စိတ်ညစ်ညူးမှုရှိလာလျှင် ဘုရားစင် ဘုရားရှေ့တော်သို့ သွားပြီး ဘုရားပန်းလဲခြင်း ၊
မြတ်စွာဘုရားကို အသေအချာကြည့် အာရုံပြုလိုက်ခြင်းဖြင့်စိတ်ညစ်ညူးမှုများပပျောက်လာသည် အမှားအယွင်းများ မပြုလုပ်မိတော့ဘဲ ရပ်တန်းမှရပ်ပြီး စိတ်ကြည်နူးမှု ချက်ချင်းရရှိလာပါသည် ။
(၆) အိမ်တွင် ဘုရားစင်ရှိသဖြင့် နာနာဘာဝ ၀ိနာဘာဝများ၏ အနှောင့်အယှက်များမှ ကင်းပြီး မကြောက်မရွံ့နေနိုင်ပါသည် ။
(၉) ဘုရားစင်ရှိသဖြင့် မြတ်စွာဘုရားနှင့် အတူတကွနေထိုင်ရသကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး သူတပါး၏ ချီးမြှောက်ပူဇော်မှုကို ၊ ခံယူရရှိနိုင်ပါသည် ။ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် (၁) ဘုရား ၊(၂) တရား ၊(၃) သံဃာ ၊ (၄) ကံ ၊ ကံ၏အကျိုး ၊ (၅) အကြောင်းနှင့် အကျိုး ဆက်သွယ်ဖြစ်မှု ၊(ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်)(၆) အတိတ်ဘ၀ အနာဂတ်ဘ၀ တို့ကို ယုံကြည်ရသည် ။ဤ၌ ကံဟူသည် ကုသိုလ်ကံ(ကောင်းသောအလုပ်)နှင့် အကုသိုလ်ကံ(မကောင်းသောအလုပ်)ပင် ဖြစ်သည် ၊ လောက၌ မည်သူမဆို ကောင်းတာလုပ်လျှင် ကောင်းကျိုးကိုခံစားရ၏ ။ မကောင်းတာလုပ်လျှင် မကောင်းကျိုးကို ခံစားရ၏ ။
မိမိပြုလုပ်သော ကံ၏ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ(ကမ္မဿကာ) မည်ပါသည် ၊ မိမိပြုလုပ်သောကံအရ ဆိုးမွေကောင်းမွေ (ကမ္မဒါယာဒ)ကို ခံယူရမည်ဖြစ်သည် ။ ဤသို့ ယုံကြည်လက်ခံခြင်းကို “ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိ”ဟု ခေါ်ပါသည် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး သည် ထိုသို့ လက်ခံယုံကြည်နေက အမှန်ကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်းဖြစ်၍ အယူဝါဒ မပျက်မစီး တည်နေသည် မည်၏ ။ဤကဲ့သို့ ဘုရား တရား စသည်တို့ကိုမယုံကြည်တော့ဘဲ (၁) လောက၌ ဖန်ဆင်းရှင်ရှိ၏ မြေကြီး၊ ဟိမ၀န္တာတောင်၊ စကြာသဠာ၊ မဟာသမုဒ္ဒရာတို့နှင့် သတ္တ၀ါအားလုံးကို ထိုဖန်ဆင်းရှင်က ဖန်ဆင်း၏ဟု မှားယွင်းစွာ ယူဆတတ်ကြသည် ။ ယင်းသို့ယူဆသောဝါဒကို “ ဖန်ဆင်းရှင်( ဣဿရနိမ္မာန)၀ါဒ ”ဟု ခေါ်ပါသည် ။
မကောင်းမှုကိုပြုသော်လည်း မကောင်းမှုအကုသိုလ်မမည်ဟု ယူဆတတ်ကြသည် ။ ယင်းသို့ယူဆခြင်းသည် အကြောင်းကံကို ပယ်ခြင်းဖြစ်၍ “အကရိယဒိဋ္ဌိ”ဟု ခေါ်ပါသည် ။
(၃) တဖန် ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံတို့၏ အကျိုးတရားဟူ၍ မရှိ ။ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံတို့ကိုပြုလုပ်သော်လည်း မည့်သည့်ကောင်းကျိုး မကောင်းကျိုးကိုမျှ မခံစားရဟု ယူဆတတ်ကြသည် ။ ယင်းသို့ယူဆခြင်းသည် အကျိုး(၀ိပါက)ကို ပယ်ခြင်းဖြစ်၍ “နတ္ထိကဒိဋ္ဌိ”ဟု ခေါ်ပါသည် ။
(၄) ထို့ပြင် ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံဟူ၍ မရှိ ။ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံတို့၏ အကျိုးဟူ၍ လည်းမရှိဟု ယူဆတတ်ကြပြန်သည် ။ ယင်းသို့ယူဆခြင်းသည် အကြောင်း အကျိုးနှစ်မျိုးစလုံးကို ပယ်ခြင်းဖြစ်၍ “အဟေတုကဒိဋ္ဌိ”ဟု ခေါ်ပါသည် ။ ဤသို့ စသည်ဖြင့် အယူမှား (မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ) တမျိုးမျိုးကို လက်ခံယုံကြည်လိုက်လျှင် ထိုသူ၏ မူလက ရှိနေသော အယူမှန်ဝါဒ (သမ္မာဒိဋ္ဌိ)ပျက်စီးလေတော့သည် ။
ထို့ပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တယောက်သည် ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံနှင့် ယင်းကံတို့၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကိုလည်းကောင်း ၊ ပစ္စုပန်လောကနှင့် တမလွန်လောကကိုလည်းကောင်း ၊ ယုံကြည် ရဦးမည်ဖြစ်သည် ။ ယင်းတို့ကို မယုံကြည်ဘဲ “ ဤဘ၀နှင့် ဤဘ၀ ပြုပြုသမျှ ကုသိုလ်အကုသိုလ်များသည်သေလျှင် ပြတ်၏ ၊ နောက်ဘ၀အတွက် အကျိုးဆက်မရှိ ”ဟု လက်ခံယုံကြည်မှုကို “ ကင်းပြတ်ဝါဒ ” (ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ)ဟု ခေါ်ပါသည် ။ အယူမှား (မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ) တမျိုးပင်ဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးအနေဖြင့် ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံနှင့် ယင်းကံတို့၏ အကျိုး ၊ ဤလောကနှင့် တမလွန်လောကကို ယုံကြည်ရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တယောက်သည် အမြင်မှန်ဆယ်ချက် (ဒသ၀တ္ထုက သမ္မာဒိဋ္ဌိ) ကိုလည်း လက်ခံယုံကြည်ရပေဦးမည် ။ အမြင်မှန်ဆယ်ချက်သည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏–
(၃) လက်ဆောင် ပေးကမ်း ပူဇော်မှု (ပဟေဏက သက္ကာရ)၏ အကျိုးရှိကြောင်းယုံကြည်ခြင်း။
(၁၀) ဤလောက၌ ငြိမ်သက်ကောင်းမွန်စွာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြသော သမဏ ဗြဟ္မဏတို့ ရှိကြကြောင်း ၊ ယင်းတို့က ဤလောက တမလွန်လောကကို ကိုယ်တိုင်သိမြင်၍ လူအများကို ပြန်လည် ဟောပြကြကြောင်း ယုံကြည်ခြင်း ။
ဤအချက်(၁၀)ချက်တို့ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် မှန်ကန်သော ယုံကြည်ချက်ပင်ဖြစ်သည် ။သို့ဖြစ်၍……
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တယောက်သည် ဖေါ်ပြပါ ရတနာသုံးတန် ကံ-ကံ၏ အကျိုးစသော အချက်တို့ကို သံသယကင်းစွာယုံကြည်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည် ။
(၁)ဥဒ္ဓံ ယာဝဘ၀ဂ္ဂါစ အဓေါ ယာဝအ၀ီစိတော ၊ သမန္တာ စက္က၀ါဠေသု ယေသတ္တာ ပထ၀ီစရာ ။
(၂)ဥဒ္ဓံ ယာဝဘ၀ဂ္ဂါစ အဓေါ ယာဝအ၀ီစိတော ၊ သမန္တာ စက္က၀ါဠေသု ယေသတ္တာ ဥဒကေစရာ ။
(၃)ဥဒ္ဓံ ယာဝဘ၀ဂ္ဂါစ အဓေါ ယာဝအ၀ီစိတော ၊သမန္တာ စက္က၀ါဠေသု ယေသတ္တာ အာကာသေစရာ ။
(၂) ( — ) ဥဒကေ စရာ = ရေ၌ကျက်စားကုန်၏ ၊ ( — ) ။ ။
(၃) ( — ) အာကာသေ စရာ = ကောင်းကင်၌ ကျက်းစားကြကုန်၏ ၊ ( — ) ။ ။
အာနုဘာဝေန = အာနုဘော်တော်အားဖြင့် ၊
(၆) စိရံ တိဋ္ဌတု သဒ္ဓမ္မော ဓမ္မေ ဟောန္တု သဂါရ၀ါ ၊ သဗ္ဗေပိ သတ္တာ ကာလေန သမ္မာ ဒေဝေါ ပ၀ဿတု ။
သဒ္ဓမ္မော= သုတ္တန္တပိဋကတ် ၊ ၀ိနိယပိဋကတ် ၊ အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ဟူသော ပရိယတ္တိ သဒ္ဓမ္မသည် ။
(၇) ယထာ ရက္ခိံသု ပေါရာဏာ သုရာဇာနော တထေ၀ိမံ ၊ ရာဇာ ရက္ခတု ဓမ္မေန အတ္တနောဝ ပဇံ ပဇံ ။
ပေါရာဏာ = ရှေး၌ဖြစ်ကုန်သော ၊
ရက္ခိံသု ယထာ = စောင့်ရှောက်ကြကုန်ဘိသကဲ့သို့ ၊
(မူရင်း မဇ္ဈိမဒေသသံနှင့်မြန်မာသံ အနည်းငယ်ကွာခြားမှုများရှိပါသည်။)
၁။လုံးဆင့်စာလုံးများတွင် အပေါ်ကစာလုံးသည် ရှေ့ မှာရှိသောစာလုံးကိုကပ်၍ အသတ်(၀ါ)
အသံဝက် ပြုကြပါသည်။ပုံစံများ။ အတ္တ – အတ် တ ၊ အနတ္တ – အနတ် တ၊ ဓမ္မ – ဓမ် မ ။
၂။ရှေ့ စာလုံးမှာ သရသံများပါဝင်နေလျှင် ရွတ်နိုင်သောအသတ်သံသို့ ပြောင်းဖတ်ကြပါသည်။
ပုံစံများ။ ဒုက္ခ-ဒုက် ခ(ဒုတ် ခ)၊အနိစ္စ -အနိစ် စ(အနိတ် စ)၊ တိဋ္ဌတု -တိဋ် ဌ တု(တိတ် ထ် တု )။၀ိသုဒ္ဓါယ- ၀ိ သုဒ် ဓါ ယ ( ၀ိ သုတ် ဒါ ယ )၊မေတ္တာ- မေတ် တာ( မစ် တာ)။
၃။ရှေ့ စာလုံး ၏ သရသံကို ပြောင်းကြပါသည်။ပုံစံများ။ ဟောန္တု -ဟောန် တု(ဟွန် တု)။
၄။လုံးဆင့်၏နောက်မှာ စာလုံးရှိပါက လုံးဆင့်၏ အောက်မှစာလုံးကိုသံပြည့်မဖတ်ပဲ
သံဝက်ဖြင့်သာ ဖတ်ကြပါသည်။ပုံစံများ။ ရက္ခတု – ရက် ခ တု (ရက် ခ် တု)၊ အတ္တနော – အတ် တ နော( အတ် တ် နော)။
၅။နှစ်လုံးဆင့်တွင်ပါသောသရသံများကို အောက်ကစာလုံးတွင်ယူ၍ ဖတ်ကြပါသည်။ပုံစံများ။
သမ္မာ -သမ် မာ၊ ဓမ္မေန – ဓမ် မေ န ၊ ပါပုဏန္တု – ပါပု ဏန် တု (ပါ ပု နန် တု)။
၆။နှစ်လုံးဆင့် နှစ်ခုဆက်လျှင်လည်း အစဉ်အတိုင်း ချိတ်ဆက်၍ ဖတ်သွားကြပါသည်။ပုံစံများ။
သဒ္ဓမ္မ – သဒ် ဓမ် မ(သတ် ဓမ် မ)၊သုတ္တန္တ – သုတ် တန် တ၊ သမ္ပန္နာဂတံ- သမ် ပန် နာ ဂ တံ။
၇။ဿသည် သ နှစ်လုံးဆင့်၊ ဋ္ဌ သည် ဋ နှင့် ဌ ဆင့်၊ အက္ခရာ ဣ သည် အိ သံ။ နှာခေါင်းသံ
(သေးသေးတင်သံ)သည် န-သတ် ၊ မ-သတ်သံ ၊ ဉ -လေး သည် ည -ကြီးသံ သို့ဖတ်ကြပါသည်။ံပုံစံများ။ ပ၀ဿတု- ပ ၀သ် သ တု( ပ ၀တ် သ် တု)၊ရက္ခိံသု – ရက် ခိံသု ( ရက် ခိန် သု)၊ရာဇဿ – ရာ ဇသ် သ(ရာ ဇတ် သ)။ ဣ၀- အိ ၀၊ ဣဒံ – အိ ဒံ ( အိ ဒန် )။ ဉတွာ- ညတ် တ ၀ါ( ညတ် တ် ၀ါ )၊ကမ္မဋ္ဌာန်း- ကမ် မဋ် ဌာန်း( ကမ် မတ် ထန်း)။
ဣဿရ နိမ္မာန- ဣ သ် သ ရ နိမ် မာ န ( အိတ် သ် ရ နိမ် မာ န )။
၈။အ နှင့် သ တို့ ရှေ့ မှာရှိသောစာလုံးအချို့ ကို သံပြည့် ရွတ်ဖတ် ပါသည်။ပုံစံများ။အ ဗျာပဇ္ဖာ-
အ- ဗျာ ပဇ် ဇာ(အ-ဗျာ ပစ် ဇာ) ၊ သ ဂါရ၀ါ – သ-ဂါ ရ ၀ါ( သ-ဂါ ရ် ၀ါ)။အ၀ီစိ- အ-၀ီ စိ။
စာလုံးအချို့ ကိုကား သံဝက်နှင့်ဖတ်ကြပါသည်။ပုံစံများ။အနိစ္စ- အ နိစ် စ(အ် နိတ် စ)၊အနတ္တ-
အ် နတ် တ၊ သမဂ္ဂါ – သ မဂ် ဂါ ( သ် မက် ဂါ )။
၉။ယ-ပက်လက်သံနှင့် ရ -ကောက်သံ ကွဲပြားစွာ ရွတ်ကြပါသည်။ ယထာ-ယ ထာ၊ရာဇာ-ရာဇာ( ယာ ဇာ -ဟု မဖတ်ပါ။ လျှာလိပ်သံဖြင့်သာ ဖတ်ကြပါသည်။)။
မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပ အဝေးရောက် မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနည်းငယ်မျှ သဘောပေါက် သိမြင်၊ကျင့်သုံး၊အကျိုးရနိုင်ကြပါစေရန်တွေ့ မိသော မြန်မာနိုင်ငံသားများထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်း(နော်ဝေနိုင်ငံ)၏ စုဆောင်းဖေါ်ပြချက်ကို စာလုံးအမှန်သတ်ပုံအနည်းငယ်ပြုပြင်သည်မှ အပ မူရင်းအတိုင်း လိုအပ်သူတို့ ရရှိနိုင်ကြစေရန် ကူးယူဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ။
ဗဟုသုတတော်တော်ရပါတယ် . . . ဒါတွေကို Gong Zhu ကခုမှသိတာ . . . ဘုရားစာသာ ရွတ်ပြီး အနက်မသိဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ကျေးဇူးပဲနော် . . .